FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISpanish Intetho Yezandla YaseMerika Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseChile Intetho Yezandla yaseMexico Intetho Yezandla yasePersi Intetho Yezandla yaseRashiya Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAcholi IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBashkir IsiBhulu IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiFaroese IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHausa IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiKrio IsiKwanyama IsiLatvia IsiLhukonzo IsiLithuania IsiLuganda IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMaya IsiMyanmar IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiOromo IsiOssetia IsiPangasina IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTajiki IsiTatar IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTongan IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrdu IsiUzbek IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
UYESU walila xa umhlobo wakhe uLazaro wafayo. Ngaba ucinga ukuba uYehova waba buhlungu xa uYesu wabandezelekayo waza wafa?— IBhayibhile ithi uThixo ‘unokuba buhlungu’ zizinto ezenzekayo.​—INdumiso 78:40, 41; Yohane 11:35.
Ngaba unokuyithelekelela indlela anokuba waba buhlungu ngayo uYehova, njengoko wayebukele uNyana wakhe amthandayo esifa?— UYesu wayeqinisekile ukuba uThixo akayi kumlibala. Kungenxa yeso sizathu awathi wathetha la mazwi ngaphambi kokuba afe: ‘Bawo, ndibuyekela ezandleni zakho ubomi bam.’​—Luka 23:46.
UYesu wayeqinisekile ukuba uza kuvuswa, akayi kushiywa “esihogweni,” okanye engcwabeni. Emva kokuba uYesu evusiwe, umpostile uPetros wacaphula oko kwakubhalwe ngoYesu eBhayibhileni, esithi: “Umphefumlo wakhe awuzange ushiywe esihogweni, nenyama yakhe ayizange ibone konakala.” (IZenzo 2:31, King James Version; INdumiso 16:10) Kaloku, umzimba kaYesu awuzange wonakale engcwabeni, oko kukuthi awuzange ubole uze unuke.
Xa uYesu wayesemhlabeni, wabaxelela abafundi bakhe ukuba akazi kufa ixesha elide. Wabachazela ukuba wayeza ‘kubulawa aze avuswe ngomhla wesithathu.’ (Luka 9:22) Ngoko, ngokwenene, abafundi babengamele bamangaliswe xa uYesu wayevuswa. Kodwa ngaba bamangaliswa?— Makhe sibone.
Kumalunga nentsimbi yesithathu ngoLwesihlanu emva kwemini xa uMfundisi Omkhulu esifa kwisibonda sentuthumbo. UYosefu, olilungu elisisityebi leSanhedrin, ukwakholelwa ngokufihlakeleyo kuYesu. Uthi akufumanisa ukuba uYesu ufile, aye kuPilato, oyirhuluneli yaseRoma. Ucela imvume yokothula umzimba kaYesu kwesi sibonda aze awungcwabe. Emva koko, uYosefu uthwalela umzimba kaYesu kumyezo onengcwaba, ndawo leyo ekubekwa kuyo izidumbu.
Emva kokuba ewubekile lo mzimba engcwabeni, uqengqela ilitye elikhulu ngaphambi kweli ngcwaba. Ngaloo ndlela ingcwaba liyavaleka. Ngoku ngumhla wesithathu, ngeCawa. Ilanga alikaphumi, ngoko kusemnyama. Kukho amadoda ami apho elinde elo ngcwaba. Athunywe ngababingeleli abaziintloko ukuba enze oko. Ngaba uyasazi isizathu soko?—
Naba babingeleli babevile ukuba uYesu wayethe uza kuvuswa. Ngoko ukuze bathintele abafundi bakhe ukuba bangawubi umzimba baze bathi uYesu uvukile, bathumela abalindi. Ngequbuliso, umhlaba uqalisa ukushukuma. Ebumnyameni, kukho ukukhanya okuqaqambileyo. Yingelosi kaYehova! La majoni oyika kangangokuba akakwazi nokushukuma. Le ngelosi iya engcwabeni ize iliqengqele kude ilitye elivalileyo. Ingcwaba alinamntu!
Kutheni eli ngcwaba lingenamntu? Kwenzeke ntoni?
Ewe, kunjengokuba umpostile uPetros wathi kamva: “Lo Yesu uThixo wamvusa.” (IZenzo 2:32) UThixo wamvusa uYesu enomzimba ofana nalowo wayenawo ngaphambi kokuba eze emhlabeni. Wavuswa enomzimba womoya njengeengelosi. (1 Petros 3:18) Ngoko ukuze abonwe ngabantu, kuya kufuneka uYesu azambathise umzimba wenyama. Ngaba uyakwenza oko?— Makhe sibone.
Ngoku kuphuma ilanga. Amajoni sele emkile. UMariya Magadala namanye amabhinqa angabafundi bakaYesu basendleleni eya engcwabeni. Bathetha bodwa besithi: ‘Ngubani na oya kusiqengqela ela litye likhulu?’ (Marko 16:3) Kodwa xa befika engcwabeni, ilitye sele liqengqiwe. Yaye ingcwaba alinamntu! Umzimba ofileyo nowenyama kaYesu awusekho! Ngoko nangoko, uMariya Magadala uyabaleka aye kufuna abanye babapostile bakaYesu.
Amanye amabhinqa asala apho engcwabeni. Ayazibuza ukuthi: ‘Unokuba uphi umzimba kaYesu?’ Ngequbuliso kuthi gqi amadoda amabini anxibe iimpahla ezibengezelayo. Aziingelosi! Athi kula mabhinqa: ‘Kutheni nimkhangela apha nje uYesu? Uvusiwe. Khawulezani niye kuxelela abafundi bakhe.’ Unokuyicinga indlela anokuba abaleka ngayo loo mabhinqa! Endleleni adibana nenye indoda. Ngaba uyazi ukuba ingubani?—
NguYesu, yaye uzambathise umzimba wenyama! Naye uthi kula mabhinqa: ‘Hambani niye kuxelela abafundi bam.’ La mabhinqa avuya gqitha. Ayabafumana abafundi aze athi kubo: ‘UYesu uyaphila! Simbonile! UMariya sele exelele uPetros noYohane ukuba ingcwaba alinamntu. Ngoku baya kulo, njengokuba ubona kulo mfanekiso. Bakhangela amalaphu awayesongelwe ngawo uYesu, kodwa badidekile. Bayafuna ukukholelwa ukuba uYesu uyaphila kwakhona, kodwa oku akukholeleki.
Yintoni ekusenokwenzeka ukuba uPetros noYohane bayayicinga?
Kamva ngaloo Cawa, uYesu ubonakala kubafundi bakhe ababini abasendleleni eya kwidolophana yase-Emawusi. UYesu uhamba aze athethe nabo, kodwa abamqondi kuba akasenawo laa mzimba wenyama wayenawo ngaphambili. Bamazi kuphela emva kokuba eye wathandaza waza wanandipha isidlo kunye nabo. Aba bafundi bavuya gqitha kangangokuba bakhawuleza kangangeekhilomitha eziliqela ukubuyela eYerusalem! Mhlawumbi kusemva nje koku athi uYesu aye kuPetros ukuze ambonise ukuba uyaphila.
Kamva ngaloo ngokuhlwa yangeCawa, abafundi abaninzi bahlanganisene egumbini. Iingcango zitshixiwe. Ngequbuliso babona uYesu ekunye nabo kwelo gumbi! Ngoku bayaqonda ukuba ngokwenene uMfundisi Omkhulu uyaphila kwakhona. Khawufan’ ucinge nje indlela abanokuba bavuya ngayo!​—Mateyu 28:1-15; Luka 24:1-49; Yohane 19:38–20:21.
Ngexesha uYesu awavuswa ngalo enyakeni, abantu abaninzi bacinga ngantoni? Kodwa wena ucinga ngantoni?
Kangangeentsuku ezingama-40 uYesu ubonakala ekwimizimba yenyama eyahlukahlukeneyo ukuze abafundi bakhe babone ukuba uyaphila. Wandula ke emke emhlabeni aze abuyele kuYise ezulwini. (IZenzo 1:9-11) Kungekudala abafundi baqalisa ukuxelela wonke umntu ukuba uThixo umvusile uYesu ekufeni. Kwanaxa ababingeleli bebabetha baze babulale abanye babo, bayaqhubeka beshumayela. Bayazi ukuba xa besifa, uThixo uya kubakhumbula kanye njengokuba wamkhumbulayo uNyana wakhe.
Hayi indlela ababahluke ngayo abalandeli bokuqala bakaYesu kubantu abaninzi namhlanje! Aba bantu bacinga kuphela ngemivundla namaqanda eIsta amibalabala ngexesha uYesu awavuswa ngalo. Kodwa iBhayibhile ayithethi nokuthetha ngemivundla namaqanda eIsta. Ithetha ngokukhonza uThixo.
Nathi sinokuba njengabafundi bakaYesu ngokuxelela abantu ngommangaliso owenziwa nguThixo ngokuvusa uNyana wakhe. Asimele soyike, kwanokuba abantu bathi baza kusibulala. Ukuba siyafa, uYehova uya kusikhumbula aze asivuse, kanye njengokuba wamvusayo uYesu.
Ngaba asikuvuyeli ukwazi ukuba uThixo uyabakhumbula abo bamkhonzayo kwanokuba uya kubavusa ekufeni?— Ukuqonda ezi zinto kufanele kusenze sifune ukwazi indlela esinokumvuyisa ngayo uThixo. Ngaba ubusazi ukuba ngokwenene sinako ukumvuyisa?— Oku siza kuthetha ngako kwisahluko esilandelayo.
Ukulukholelwa uvuko lukaYesu kufanele komeleze ithemba nokholo lwethu. Nceda ufunde IZenzo 2:22-36; 4:18-20 neyoku-1 kwabaseKorinte 15:3-8, 20-23.